Dowladda Somaliya oo maanta joojisay fiisihii lagu taggi jiray dalka Suudaan, si loo hakiyo tahriibayaasha – STAR FM SOMALIA
Dowladda Somaliya oo maanta joojisay fiisihii lagu taggi jiray dalka Suudaan, si loo hakiyo tahriibayaasha
Ka dib markii ay soo baxeen wararka ku saabsan in shan boqol oo qof una badan Soomaali, ay ku dhimatay badda xiriirisa Masar iyo Talyaaniga, ayaa waxay Dowladda Somaliya qaadatay go’aan ah inay joojiso sharcigii dal ku galka ee dalka Suudaan.
Taliyaha Laanta Socdaalka & Jinsiyadaha Somaliya, General C/laahi Gaafow Maxamuud oo maanta Saxaafadda kula hadlay Magaalada Muqdisho, ayaa wuxuu xaqiijiyay inay joojiyeen Visaha lagu taggo Suudaan.
Taliyaha, ayaa wuxuu sababta ku sheegay in inta badan dadkii ka amba baxay dalka Masar, inay Viso ku taggeen dalka Suudaan, ugana sii gudbeen Masar.
Taliyaha, ayaa waxaa uu wax laga naxo uu ku sheegay in dad intaa le’eg ay mar keliya ku dhintaan badda, isagoo intaa ku daray inay soo xusuusinayso dhibaatadii dalka ka dhacday, wixii ka dambeysay burburkii Dowladdii Dhexe.
“Waa wax laga naxo in 450 qof u badan Soomaaliya inay hal mar badda ku dhamaadaan, taasi waxay na soo xusuusinaysaa 1991, markii dalka dhibaatada ka dhacday tahriibkii bilowday in dad badan ay badaha ku dhamaadeen.” Ayuu yiri General C/laahi Gaafow Maxamuud.
General Gaafow, ayaa ku baaqay in Maamul Goboleedyada Somaliya ka dhisan ay ku dadaalaan, bal inay hakiyaan dhalinta yar yar ee u hanqal taageysa inay mar uun cagta dhigaan cariga Yurub.
Gaafow waxaa uu ugu dambeen uu waalidiinta Somaliyeed uu ugu yeeray inay dadaal badani ku bixiyaan, sidii ay is hortaag ugu samayn lahaayeen inaanay ubadkoodu u tahriibin dalalka shisheeye.
Awaamiirta ay ku dhawaaqday Dowladda Somaliya, ayaa waxay ku soo beegmaysaa, xilli dad badani ay haystaan sharciga dal ku galka ee dalka Suudaan, ayna isku diyaarinayaan inay u socdaalaan dalkaasi.
Madaxweynihii hore Sh. Shariif oo la kulmay Madaxweynaha Bankiga Horumarinta Islaamka (Sawirro)
Madaxweynaha oo Golaha Ammaanka warbixin ka siinaya Xaalada Soomaaliya